Wokucwebezelisa compounds Abakhiqizi & Abahlinzeki - China wokucwebezelisa Compounds Factory
Iphepha le-Sanding Disc Hole Gold Sanding le-Polishing ...
Alahlwayo Umdwebo Gun Cup
I-XYS Free Dust Mobile Dry Grinder (Okujwayelekile)
Ishidi Lesikwele Lesikwele le-Sander-A720T engahleliwe
Ukuthengisa Okuhamba Phambili Okuhamba phambili Kwe-Wax Esisheshayo Yemoto-XYS-A2
I-XYS-A2 Rubbing Compound
I-XYS-A2 I-Wax Esheshayo ingumkhiqizo ogxila kumakhilayoni amakhulu nakulayini wesibuko. Ingasusa ngokushesha nangempumelelo amamaki e-sandpaper asele ngemuva kokufaka sandpaper kwe-P1500-P2000 futhi izuze umphumela wesibuko. Ukwakheka okuphezulu, ukusika okuphezulu okufana ne-emulsion "kungukupholisha okuyisinyathelo esisodwa," ukusebenza kahle okukhulu, isivinini esikhulu, nokucwebezela okuphezulu.
ISITOLO ESIPHEPHILE SOKUPHOLISA ISIKHUNGO SE-CAR FAST POLISH-XYS-CY0815
Lo mkhiqizo ungumpetha osebenza ngopende osebenza kahle osetshenziswa emshinini wokupholisha ngejubane elijikelezayo le-1400-2000 rpm. Ingasusa ngempumelelo amamaki esihlabathi we-P1000-P1200 sandpaper neminye imihuzuko engathi sína nezendlalelo ezinzima ze-oxide. Uma usebenzisa i-XYS CY-0187 Fine Polishing Wax, umphumela ungcono!
Amasampula wamahhala we-Car Care Polishing Compound-XYS-CY0816
Lo mkhiqizo ungumpetha osebenza ngopende osebenza kahle osetshenziswa emshinini wokupholisha ngejubane elijikelezayo le-1400-2000 rpm. Ingasusa kahle amamaki esihlabathi we-P1200 ne-sandpaper enhle. Uma usebenzisa i-ejenti yokwelashwa kwesibuko ye-XYS CY-0818, umphumela ungcono!
Metal wokucwebezelisa Compound ngoba Buffing Amasondo-XYS-CY0817
Kungumuthi wokugcoba ngopende wezimoto osetshenziswe emshinini wokupholisha ngejubane le-1000-2000 rpm. Ingasusa kahle amamaki esihlabathi we-P1500 ne-sandpaper enhle, futhi isuse neminye imihuzuko emihle, amaphutha, nezendlalelo ze-oxide!
XYS Professional wokucwebezelisa mechanical ejenti-CY0818
Lo mkhiqizo uchwepheshe wokuqedela isibuko sezimoto osetshenziswa emshinini wokupholisha ngejubane elijikelezayo le-1200-2000 rpm. Ingasusa ngokushesha nangempumelelo zonke izinhlobo zemoto yokupenda izindandatho zemoto, ukufeza umphumela omuhle wesibuko esicwebezelayo!